Ku soo dejiso firmwares rasmi ah saldhigyada Samsung | Androidsis
Eder Ferreño | | ROM, Samsung, Tababarada
Marka la eego dhibaatooyinka isticmaala badan Androidsis inuu ku noqdo xaaladdiisii ​​hore, iyadoo shirkadaha rasmiga ah ee shirkadda Samsung, iyo weydiimihiisa badan ee loo maro barta; Waxaan go aansaday in aan qoro maqaalkan oo ay la socdaan fiidiyow sharaxaad leh si aan kuu baro sida loo isticmaalo naqshadeynta cusub ee bogga sammobile.com.
En sammobile.com waxaan gacanta ku haynaa, gebi ahaanba bilaash, midna firmware asalka ah tiro badan oo ka mid ah boosteejooyinka shirkadaha waaweyn ee Kuuriya.
Fiidiyowgaan sharaxaya waxaan isku dayayaa inaan baro dadka isticmaala ee wax yar lumay, sida loo isticmaalo websaydhada aan soo sheegnay si ay ugu guuleystaan ​​guusha download firmware rabtay aaladdaada gaarka ah.
Si aad u isticmaasho bogga internetka ee sammobile.com waxaan kaliya u baahan doonaa darawal samsung oo iska diiwaangeli bilaash, hab fudud oo dhakhso badan oo aan naga qaadan doonin wax ka badan daqiiqad.
Markii aan isdiiwangalino waxaan heli doonaa dhamaan rasmiga ah Samsung firmwares, kaliya maahan kuwa rasmiga ah ee loogu talagalay boosteejooyinka leh nidaamka hawlgalka Android, waana taas sammobile.com waxaan sidoo kale ka heli karnaa firmwares u dhigma boosteejooyinkiisa oo leh nidaamka Bada, Windows Phone, Symbian iyo Limo.
Marka faylasha lagama maarmaanka ah la soo dejiyo, xaaladdan markaan u jeedno ayaa ah Android, waxaan kaliya ku qasbanaan lahayn inaan kala furfurno faylasha oo aan ku dhex marno OdinTan waxaan kugula talinayaa inaad raacdo talaabooyinka casharrada kala duwan ee loo sameeyay aaladaha kala duwan, maadaama mid waliba leeyahay qalab u gaar ah oo u gaar ah oo loo isticmaalo iyo hannaanka biligleynteeda kala duwan.
1 Sida loogu cusbooneysiiyo taleefankaaga qalabka cusub
2 Halkee lagala soo bixi karaa firmware-ka Samsung
Sida loogu cusbooneysiiyo taleefankaaga qalabka cusub
Xaaladda Samsung, cusbooneysiintu badanaa waxay qaadataa waqti dheer si ay u gaaraan dhammaan isticmaaleyaasha. Sababtaas awgeed, kuwa ugu samirka badan rakibidda qalab ka socda gobol kale taleefankaagasidaa darteed maahan inay sugaan OTA. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad cusbooneysiiso taleefankaaga waqti ka hor. Marka cusbooneysiintan ay ku jirto gobolkaaga, waa inaadan mar dambe helin OTA, maxaa yeelay waa inay ogaataa inaad horey u haysatid qalabka cusub, taas oo ah tan la sheegay. Wixii cusbooneysiinta soo socota, waxa caadiga ah waa inaad hesho OTA dhibaato la'aan. Laakiin waxaad had iyo jeer fursad u leedahay inaad ku soo dejiso cusbooneysiinta gacanta, gaar ahaan marka laga hadlayo cusbooneysiinta qalabka loo yaqaan 'firmware updates' ee loo sii daayo taleefannada.
Haddii aadan rabin inaad sugto cusbooneysiinta inay timaado, waxaan kala soo dagsan karnaa firmware gobol kale, bogagga internetka sida Sammobile ama Stockrom. Noocyada faylalka ah ayaa nooga diyaar ah bogaggan. Marka, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kala soo baxno, taas oo aad ku sameyn karto kombuyuutarkaaga, inaad haysato feylkaan horeyba loo heli jiray oo aad awood u yeelan karto inaad bilowdo.
Markaan dhahno firmware ayaa lasoo dejiyey, waa waqtigii la rakibey. Nidaamku waa xoogaa adag yahay, marka lagu daro in badan oo la beddelo iyadoo ku xiran astaanta taleefanka. Nasiib wanaag, bogagga ay ka soo dejisteen waxaa ku yaal tilmaamo, meesha aan talaabo talaabo ugala socon karno waxa ay tahay inaan sameyno, si aanan qalad u dhicin. Guul darrooyinka noocan ah waxay ka dhigi kartaa taleefanka mid aan la isticmaali karin. Marka waa inaad taxaddar yeelataa.
Telefoonada qaarkood, waxaad isticmaali kartaa ABD si aad ugu rakibto taleefanka. Moodooyinka kale, sida Samsung, waa inaad isticmaashaa qaabka soo dejinta ka dibna u isticmaal Odin taleefanka ku xiran PC-ga, si loo rakibo. Noocyo kale ayaa fududeynaya, sida ASUS, halkaasoo ay tahay inaad nuqul ka sameyso feylka xusuusta taleefanka oo aad dib u bilowdo. Xaaladaha oo dhan, waxa muhiimka ahi waa in la raaco tilmaamaha, oo sharraxaya waxa la sameeyo iyada oo ku xidhan telefoonka aad ku haysato kiiskaaga.
Halkee lagala soo bixi karaa firmware-ka Samsung
Sammobile ka sokow, waxaa jira ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo lagu awoodo si fudud u soo dejisan firmware rasmi ah oo Samsung ah. Degelkani waa Stockrom, kaas waad ku booqan kartaa xiriiriyahan. Websaydhkan ayaa suurtogal ka noqon doonta helitaanka qalabkan noocyada Kuuriyaanka ah, oo aad awood u yeelan doonto inaad kala soo baxdo taleefankaaga. Waa la ilaaliyaa ilaa taariikhda iyo fursado badan oo arrintan la xiriira.
Xigasho - sammobile.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo soo degsado firmware rasmi ah Samsung terminals
Waxa ugu fiican marka nidaamka mar horeba wax badan laga beddelay. Iska daa warshad 🙂 waxay shaqaysaa 100%
Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa ka dib markaad rakibto dhowr roms, si aad u sameyso rakibida qalabka asalka ah ee nadiifinta wax walba.
Waa salaaman tahay, saaxiib wanaagsan Francisco, waxaan qabaa su'aal. Waxaan iibsaday dhowr bilood ka hor galaxy s3 mini model GT-I8190 oo saacad keena. 4.1.1 laakiin ka saar nooca asalka ah kuna rakibo mid kale oo la kariyey, hada waxaan rabaa inaan dib u cusbooneysiiyo nooca asalka ah, ka soo dejiso romerka goobta qalabka ee culeyskeedu yahay 657 mb laakiin feylka la is dulfuulay kaliya wuxuu leeyahay feyl la yiraahdo HOME_I8190LUBALJA_I8190LUWAALJ4.tar.md5 mana keento wax intaa ka badan, Hadda ma garanayo sida loogu rakibo Odin maadaama ay kaliya keeneyso feylkaas oo aan qiyaasayo in pda, laakiin sida aan ugu sameeyo xulashooyinka kale ee aan ahayn Modem iyo CSC.
Caawintaada iyo faallooyinkaaga.
Waxay ku socotaa PDA, wax kasta oo aad u baahan tahay ayaa lagu soo daray taas. Tar.
Markay ahayd 15/04/2013 00:26 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Mahadsanid, tijaabin ayaan sameyn doonaa.
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan hayaa taleefan Samsung Galaxy Amp SGH I407 ah waxaanan raadinayaa Rom on Sammobile ma helin. Fadlan, waxaan ubaahanahay caawinaadaada sababtoo ah kama aanan helin kaydka Rom meel kasta. Waxay u egtahay in moodeelkani uusan ka imaan Samsung. Sidoo kale waa Aio oo u muuqda sida laga soo xigtay macluumaadka laga raadiyay Mareykanka. Waa Samsung kii ugu horreeyay ee isiiya madax xanuun. Mahadsanid salaan.
Jawaab Luis Manuel Lupiáñez León
Sideen ku samayn karaa taas? Waxaan rabaa inaan uga tago midka ku yimid cusbooneysiinta ota
Waa maxay nooca terminaalka ah ee aad haysato?
Way fududahay sida loo soo dejisto qalabka iyo ku iftiiminta qaabka soo dejinta iyada oo loo marayo odin.
Paco iiga jawaab dhawr su'aalood. Loogu talagalay Galaxy S I9000. Waxaan u arkaa in Spain ay jirto FOP firmware option oo la heli karo marka laga reebo kuwa ka shaqeeya.
Ka sokow, haddii aan isticmaalo Yoigo oo aan ka rakibo firmware shirkad kale, dhibaato ma jirtaa? Waxay joogsanaysaa sii deynta haddii aan rakibo qof kale? Mise waxa kaliya ee ay qabato waa rakibida barnaamijyada shirkad walba ay ugu talagasho saldhigyadooda cusub?
Macna ma laha nooca firmware-ka aad rakibtay, taleefanku wuxuu ahaan doonaa mid bilaash ah, waxa kaliya ee aad yeelan doontaa waa furaha furaha ee hawlwadeenka su'aasha laga qabo iyo barnaamijyada horay loo rakibay.
Sidoo kale waa inaad gacanta u dhigtaa apn-ka.
Markay ahayd 05/04/2013 01:31 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Caawinaad looga baahan yahay Samsung See ll waxaan jeclaan lahaa in kor loo qaado
softiweerkaaga, waxaan soo galay ikhtiyaarka cusboonaysiinta Software-ka waxayna ii sheegaysaa taas (Maya
Ma jiro faylka cusbooneysiinta ee firmware) Sidee baan u sameyn karaa? Iyo hadaad awoodo
ku rakib nooc kale oo firmware ah.
Jawaab Pedro Alejandro Carias Fuentes
Mudane. Francisco, waad ku mahadsan tahay macluumaadka. waxaan hayaa samsung corby waxaan rabaa in aan ku dhajiyo firmware loogu talagalay samsung genoa c3510. sida aniga ila ah waxay leeyihiin isla qalab hardware ah. way shaqeyn doontaa wax talo ah? salaan =)
Ku jawaab usha
Waad salaaman tihiin dadka, waa hagaage waxa igu dhacaya hadda waa inaanan heli karin wax kayd ah oo loo yaqaan 'galaxy core i8260' sababtoo ah cerro iyo sammovile hotfiles ayaa lahaa dhammaan shirkadaha, waana deg deg haddii qof haysto ama haysto keyd aad ayaan u jeclaan lahaa badan
Ku jawaab lucasmendoza
hello people Waxaan doonayay inaan ka tago dhibaatadayda qx run waxaan hayaa qoraal xun waxaan hayaa note 2 usbuuc ka horna qof ayaa bilaabay inuu taleefoonka galo, qof ayaa garanaya waxa ay tahay inaan sameeyo si aan u xaliyo dhibaatada?
Waa salaaman tahay Francisco, waxaan ku noolahay Venezuela waxayna ii keeneen Samsung Galaxy Core I8260 oo Spain ah, khadkaygu wuxuu ka socdaa movistar oo sifiican ugama xidhi karo barxada, waxaa lagu samayn karaa Edge oo kaliya, ma i caawin kartaa Aniga ahaan inaan ku rakibo qalabka 'Venezuela', laakiin dhab ahaantii waan yara lumay, waan ku qanacsanahay dhammaan wada shaqeynta aad isiin karto. Dhamaan wanaag
Waad salaaman tihiin asxaabta, sideen u soo degsadaa nooc kasta oo barnaamij software ah?
Oday ugu jawaab
see tahay FRANCISCO !! Fadlan, waxaan u baahanahay inaan galo xisaabta sammobile mana diiwaan gelin karo ... sawirkaasi ima siinayo! Waxaan dhigay rom xun waxaanan badalay IMEI !! Waa i9060l neo weyn oo ka yimid Argentina (dabcan) .. mahadsanidiin kahor!
Ku jawaab qoraxda
Hallow Francisco Ruiz! Wali bilaash ma noqonaysaa haddii aan isticmaalo firmware Sammobile ah?
Ku jawaab jonny
Waa salaaman tahay Francisco, waad ogtahay inay i siiyeen s2 i9100 si aan u sii daayo, waxaan ku xididaystay kingoroot ka dibna waxaan u gudbiyay z3x si aan u sii daayo, waayo halkan ma uusan dooneynin inuu shido wax intaa ka badan sidoo kale pc-ga ma aqoonsana waxay qabataa qaabka soo kabashada ama qaabka soo dejinta oo waxaa lagu tijaabiyay batari kale waxna kuma dhagan yahay qofka soo qabtay iyo tirada ay kor u qaadeyso inay daarto laakiin ma muujineyso calaamadaha nolosha ma iga caawin kartaa waan ku qanacsanahay runtii…
haye sidee tahay .. waxaan ku rakibaa dhamaan filimka sifiican laakiin taleefanka gacantu wuu i shidaa wuuna sudhan yahay astaanta samsung :, (.. maxaad ku talinaysaa?
SALAAN WELI WAAN RABAA IN AAD SOO BARO SAMSUNG I9060M
Jawaab mauriciovillanueva2010o Villanueva
Waad salaaman tahay, waxaan ka rakibey qalab sammobile ah odin ilaa salsung core 18260l iminkana waxaan ka maqanahay shabakad, kaliya waxaan helaa wicitaano deg deg ah. Ma i caawin kartaa ama ii sheegi kartaa sababta tan keentay
ku darso 93 dijo
Waxay ii dhaafaan filmaware-ka samsung galaxy core prime SM-G360T1
Ku jawaab ylainez93
Waad salaaman tihiin, bogga lagu soo dejisan karo qalabka firmware lama heli karo, qofna ma garanayaa inuu jiro bog kale?
Jawaab Luis Montenegro
Dhibaatadaydu waxay tahay inaanan cusbooneysiin karin softiweerka taleefankayga maxaa yeelay waxaan helayaa calaamado sheegaya in qalabkeyga la cusbooneysiiyay oggolaansho la'aan, waxaan galayaa bog la yiraahdo Samsung kies
Waxaan xasuustaa markaan arkay video la cusbooneysiin karo oo ah nooca ugu dambeeya ee androi haddii markaan shido taleefankayga aan dhagsiiyo furaha mugga oo lagu daro furaha dabka / furaha iyo furaha bilowga, waan sameeyay waana warqad ii muuqatay oo i leh Waxaan ku riixay furaha mugga kor ama hoos, waan sameeyay wixii fiidiyowgu sheegay oo waxaan cadaadiyay furaha mugga korkiisa iyo caruusadda cagaaran ee androi waxay u muuqatay sidii inay wax ka beddelayaan. Waxaan sugay xoogaa daqiiqado ah markii ay sii socotana waan cadeeyay oo batteriga ka saaray maxaa yeelay si caadi ah uma dansan wax isbadal ahna malahan.
Waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso.
Waxaan hayaa samsung galaxy grand prime qaabka ayaa yidhi waa SM-g530m.
Waxaan xasuustaa markaan arkay muuqaal video ah oo leh waad ku cusbooneysiin kartaa nooca ugu dambeeya ee android hadii markaan shido taleefankayga waxaan kor udhajiyay furaha mugga oo lagu daray furaha furaha / furaha iyo furaha bilowga, waan sameeyay waana I si aad u riixdo furaha mugga kor ama hoos, waxaan sameeyay wixii fiidiyowgu yidhi oo waxaan ku cadaadiyey furaha mugga oo caruusadda cagaaran ee android ayaa u muuqatay sidii iyagoo wax ka beddelaya. Waxaan sugay xoogaa daqiiqado ah markaan sii wadayna waxaan ka saaray batariga maxaa yeelay si caadi ah uma dansan wax isbadal ahna malahan.
hello francisco dhibaato ayaan ku qabaa qolkeyga samsung note s4 gabadheyda waxay ilaawday erayga sirta manahelikaro kumana heli karo waxaan isku dayay hab dib ucodsiin ah lakin kaliya android monitor ayaa dhalaalaysa mana dhaqaaqeyso wax mahadsanid ah ama qof iga caawiya
Ku jawaab legna
markaad rakibineyso qalabka galaxy e7 sm-e700m ma daarmayo wifi .. fadlan caawi fadlan
Ku jawaab kaper
Waxaan ahay qof quus ah, waxaa ii soo baxday inaan ku noolahay Cuba saaxiibkayna wuxuu i siiyay samsung galaxy core prime sm-g360t1 sidaad ogtahayna dalkii ugu dambeeyay iyo markii ugu horeysay ee magaalada laga helo internetka meelaha qaar ee bulshada. by WiFi oo aad u cad tan iyo markii laga qaado saacadiiba. Waa hagaag waxaan isku dayay inaan xidido wayna sameysay laakiin ma aanan codsan furitaanka oem ee soosaaraha oo xarkaha waxaa lagu xanibay fariin xiraha frp waxaan ku qaatay qarash ilaa aan ka helay lugteyda oo ku xirmay meeshii ay aheyd. Ma iga caawin kartaa khadka tooska ah ee aan ka heli karo taleefanka ROM-ka Samsung galaxy core prime sm-g360t1 by metropc
Jawaab Julio Efren Moreno
Maamulaha waxaad wax ugu qori kartaa emaylkeyga dhibaato ayaan ka qabaa inaan iska diiwaan geliyo sammobile
igu caawi akoon aan iskudayey inaan iska diiwaangeliyo SAMMOBILE mudo 2 maalmood ah imana diiwaan geliso
Waad salaaman tahay, subax wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso ma aanan awoodin inaan koonto ka sameysto sammobile, waa inaan si deg deg ah ugu baahanahay inaan kala soo baxo firmware-ka galaxy tab 2 10.1 GT-P5110 ee Colombia
Fadlan ii caawin !!!!
Fiid wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawiso xalinta dhibaatadan, taleefankayga gacanta waxaan ku arkaa ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo uu xannibayo FRP, waa samsung galaxy core prime model SM-G360T1, waxay ka timid shirkadda metro pcs ee dalka Mareykanka, waa maxay barnaamijka miyaan u baahanahay inaan ka saaro arintaas?
Ku jawaab ivan murillo
ciise adriancamacho dijo
Ka waran saaxiibkay maxaa yeelay ra'iisul wasaaraha weyni wuxuu ii muuqdaa in qalabkeyga wax laga badalay ogolaansho la'aan oo dhacda inaan rabo inaan cusbooneysiiyo laakiin aniga ima caawin karo fadlan
Ku jawaab ciise adriancamacho
WAA MAXAY CODKA PARAGUAY
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan hayaa taleefan Samsung Galaxy Amp SGH I407 ah waxaanan raadinayaa Rom on Sammobile ma helin. Fadlan, waxaan ubaahanahay caawinaadaada sababtoo ah kama aanan helin kaydka Rom meel kasta. Waxay u egtahay in moodeelkani uusan ka imaan Samsung. Sidoo kale waa Aio oo u muuqda sida ku cad macluumaadka laga raadiyay Mareykanka. Waa Samsung kii ugu horreeyay ee isiiya madax-xanuun. Mahadsanid salaan.
fiican kama furi karo firmware laga soo dejiyey sammobile
Habeen wanaagsan waxaan hayaa nooca loo yaqaan Korean Samsung Galaxy S5 model G9006V waxaan jeclaan lahaa inaan rakibo softiweerka maxaa yeelay taleefanka ayaa ka tagaya codsiyada markuu soo galayo waa mid aan la xakamayn karin, yaa i siin kara barnaamijka aan ku rakibo.
xasan xasan dijo
Waxaan iskudayey inaan soo dejiyo firmware-ka bilaashka ah ee galaxy core2 Colombia muddo laba maalmood ah, saacado badan ka dib markaan sugayo soo dejinta, iima oggolaaneyso inaan faylka kala furo, waxay ii sheegaysaa inuu yahay mid aan waxba ka jirin. Ma i caawin kartaa?
Jawaab si aad u hesho saenz
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaan ku qabaa taleefankayga, waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo imikana si joogto ah ayaad u xukuntaa oo ma geli karo habka soo kabashada, waxaan soo degsaday xoogaa qalab ah, laakiin Odin ayaa khalad i siiya, ma i caawin kartaa, emailkaygu waa abel@portadavision.icrt.cu nambarka taleefanka Samsung MS-G130HN, WAA HADIYAD KA SOO BAXAY SAAXIIB KU NOOL BARCELONA
Jawaab ABEL SALAZAR DIAZ
Aad baan u faraxsanahay, waxaan u baahanahay inaan helo faylka PIT-ka si aan u ifiyo SM_G361F. Qof baa i caawin kara.
Salaan kadib, waxaan hayaa GT-S7582 mana heli karo qalabka lagu isticmaalo halkan Venezuela, fadlan ma i caawin doontaa si aan u ogaado midka halkan lagu isticmaalo fadlan? Ama haddii aad hayso taleefan qaabkan ah ma ii gudbin kartaa xogta ka muuqata macluumaadka aaladda meesha ay ku qoran tahay baseband, nooca iyo xogta kale, fadlan igu boorri.
ka dib markaan cusbooneysiiyo samsun s8 ee t-mobile-ka ma dhameystiri karo qaabeynta maxaa yeelay waxay ii sheegaysaa inay jirtay isku day soo celinta wershad aan la fasaxin, waxay i weydiineysaa inaan ku xirmo Wi-Fi markii aan sameeyona waxay ii sheegtaa in aanan haysan marinka shabakadda. Maxaan sameyn karaa?